Sanduuqa Kaydinta Doll ahama ee ahaanta Cadaadiska Cadaadiska u adkeysata
Sanduuqa Kaydinta ee Dollsyada Tayada Sare ee iibka ah
Ma waxaad raadineysaa hab fiican oo aad ku ilaaliso caruusadahaada? Sanduuqa hawada ee caruusadu waa xulasho wanaagsan. Waxaa loo isticmaali karaa gaadiidka, kaydinta iyo ilaalinta caruusadaha. Waxay ka samaysan yihiin xaashida cufnaanta sare waxayna u adkeysan kartaa saameynta weyn. Ka ilaali caruusadahaaga galmada waxyeelo. Dooro sanduuqa aad ku jeceshahay ee doll ee hoose
157CM Shoogga Caddaynta Jinsiga Doll Kaydinta Sanduuqa Anti-fall Air Box
Qaabka ugufiican ee loo ilaaliyo caruusadaha Jecel Sanduuqa Hawada Doll